Web ကို - categories - [နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ]
ထိတှေ့ - Switch to English
ဘာသာစကားများ Afrikaans - afአማርኛ - amعربى - arAzərbaycan - azбеларускі - beбългарски - bgবাঙালি - bnBosanski - bsCatalà - caCebuano - cbCorsu - coČeška - csCymraeg - cyDansk - daDeutsche - deΕλληνικά - elEnglish - enEsperanto - eoEspañol - esEesti keel - etEuskal - euفارسی - faSuomi - fiFrançais - frFrysk - fyGaeilge - gaGàidhlig na h-Alba - gdGalego - glગુજરાતી - guHausa - haहिंदी - hiHmoob - hmHrvatski - hrKreyòl Ayisyen - htMagyar - huʻŌlelo Hawaiʻi - hwհայերեն - hybahasa Indonesia - idNkebi - igÍslensku - isItaliano - itעִברִית - iw日本語 - jaWong Jawa - jwქართული - kaҚазақша - kkភាសាខ្មែរ - kmಕನ್ನಡ - kn한국어 - koKurdî - kuКыргызча - kyLatine - lalëtzebuergesch - lbລາວ - loLietuviškai - ltLatviešu - lvMalagasy - mgMaori - miМакедонски - mkമലയാളം - mlМонгол хэл - mnमराठी - mrMelayu - msMalti - mtမြန်မာ (ဗမာ) - myनेपाली - neNederlands - nlNorsk - noChichewa - nyਪੰਜਾਬੀ - paPolski - plپښتو - psPortuguês - ptRomână - roРусский - ruسنڌي - sdසිංහල - siSlovenský - skSlovenščina - slSamoa - smShona - snSomali - soShqiptar - sqСрпски - srSesotho - stSunda - suSvenska - svKiswahili - swதமிழ் - taతెలుగు - teТоҷикӣ - tgไทย - thTagalog - tlTürk - trУкраїнська - ukاردو - urO'zbek - uzTiếng Việt - viisiXhosa - xhייִדיש - yiYorùbá - yo简体中文 - zh繁體中文 - ztZulu - zu
> Web ကို
အကောင်းဆုံးစျေးပေါက web hosting အတွက်
2018-09-06 2019-05-22 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
အကောင်းဆုံးစျေးပေါက web hosting အတွက် : 2018 Bluehost hosting 1st ရွေးချယ်မှုကအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရေးကို web: 2.95 $ / 2.55 €
အကောင်းဆုံးကို web 2018 ရွေးချယ်ရေး hosting: စျေးအသက်သာဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံး web hosting တစ်ဦး shared အပေါ်, တစ်ဦးရှေ့စာမျက်နှာသို့ web hosting တစ်ခုပေါင်းစုံဒိုမိန်း hosting အတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်အစဉ်အမြဲနှိုင်းယှဉ်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုကမ်းလှမ်းမှုအများအပြားနှင့်အတူကလက်ျာက်ဘ်ဆိုက် hosting ကိုရှာဖွေရန်အလွန်ခက်ခဲသည်ကတစ်ခုတည်းက်ဘ်ဆိုက်အဘို့ဖြစ်သင့်တဲ့ wordpress ကိုဘလော့ဂ် hosting hosting တစ်ခုသို့မဟုတ်မိုဃ်းတိမ်ကို hosting အတွက်။...
အမေဇုံ Associates မှ OneLink - တစ်လောကလုံးအမေဇုံ Affiliate link ကို
2018-09-20 2019-05-22 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
အမေဇုံ Associates မှ OneLink - တစ်လောကလုံးအမေဇုံ Affiliate link ကို : အမေဇုံ Affiliate link ကို Global
အမေဇုံပဲအမေဇုံ OneLink Affiliate, အမေဇုံ Affiliate အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသွားအလာအပေါ်ထုတ်ကုန်များအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလင့်များတည်ဆောက်ရန်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။...
PrestaShop ကိုယ်တိုင် module တစ်ခု install လုပ်
2018-11-06 2019-05-22 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
PrestaShop ကိုယ်တိုင် module တစ်ခု install လုပ် : PrestaShop ကိုယ်တိုင် module တစ်ခု install လုပ်
PrestaShop အတွက် module ကို install လုပ်နည်း သငျသညျ WordPress ကိုသို့မဟုတ်အခြားအွန်လိုင်းအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များအတွက်ကြည့်ရှုရန်အသုံးပြုနိုင်လို installation ကို module ကို, အပြည့်အဝအလိုအလြောကျမဟုတ်ပါဘူးကြောင့်အထူးသဖြင့်အခုမှစအဘို့, PrestaShop အတွက် module တစ်ခု install လုပ်ဖို့လှည်နိုင်ပါတယ်။...
က Firefox မှာအမှားများပါဝင်သောကြောင့်အဆိုပါပုံရိပ်ပြသရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး PHP ကို ​​GD နေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ပုံရိပ်
2018-06-28 2019-04-28 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
က Firefox မှာအမှားများပါဝင်သောကြောင့်အဆိုပါပုံရိပ်ပြသရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး PHP ကို ​​GD နေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ပုံရိပ် : အတွက် Firefox ကိုအပေါ်အမှားများပါဝင်သောကြောင့်အဆိုပါပုံရိပ်ပြသရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအမှား
PHP ကိုအတူပုံရိပ်တစ်ခုထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာဥပမာအား JPEG, အစား PNG နှင့်အတူကုဒ်, ဒါမှမဟုတ်အလားတူတဦးတည်းကိုအောက်တွင်သုံးပြီးဆာဗာထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ပုံရေစာတစ်ခုဖြည့်စွက်အဘို့, image ကိုအားလုံးမှာထုတ်လုပ်ပြီးနှင့်မှားယွင်းမှုတစ်ခုပစ်, Firefox ကိုအပေါ်ကိုတိုက်ရိုက်မြင်နိုင်ပေမယ့်မရမရစေခြင်းငှါ, Chrome ကအပေါ်။ ...
2018-07-09 2019-04-28 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
MySQL ဖန်တီး Timestamp ကို updated
2018-07-10 2019-04-28 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
MySQL ဖန်တီး Timestamp ကို updated : ဒါဟာ SQL သုံးပြီးထိုသို့ပြုမှလည်းသင်တန်း၏ဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ပါသည်, ဤနေရာတွင်သက်ဆိုင်ရာကုဒ်ရဲ့:
phpmyadmin စားပွဲပေါ်မှာလက်ရှိ Timestamp ကိုဖန်တီး phpMyAdmin ကို အသုံးပြု. MySQL အတွက်ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးပြုပြင်မွမ်းမံရက်စွဲများပါဝင်သောအချိန်တံဆိပ်ခေါင်းများနှင့်အတူလယ်ကွင်း Creating ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။...
phpMyAdmin တစ်ဦးက MySQL ဒေတာဘေ့စရှိ Excel ကိုဖိုင်ကို import လုပ်နည်း
2018-07-14 2019-04-28 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
phpMyAdmin တစ်ဦးက MySQL ဒေတာဘေ့စရှိ Excel ကိုဖိုင်ကို import လုပ်နည်း : ဒေတာဘေ့စနှင့်စားပွဲပေါ်မှာမှလင့်များနှင့်အတူသွင်းကုန်ရလဒ်များကို
MySQL phpMyAdmin ကမှသွင်းကုန် Excel ကို ဒါဟာ MySQL database ကိုအတွက်တင်သွင်းမီ, Excel ကိုအချို့အချက်အလက်ပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့တစ်ခါတစ်ရံပိုမိုလွယ်ကူသည်။...
Prestashop 1.6 အပြောင်းအလဲဆိုင်အခြေစိုက်စခန်း URL ကို
2018-07-20 2019-04-28 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
Prestashop 1.6 အပြောင်းအလဲဆိုင်အခြေစိုက်စခန်း URL ကို : အသစ်က URL ကို
သင့်ရဲ့ဆိုင်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးမှပြီးနောက် Prestashop 1.6 အပေါ်ကိုသင်အသစ်တစ်ခုကို domain name ကိုရချင်ပေလိမ့်မည်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ချိန်ချိန်ပြောင်းလဲ။...
တစ်ဦးက Facebook စာမျက်နှာ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြောင်းလဲဖို့ကိုဘယ်လို
2018-07-22 2019-04-28 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
တစ်ဦးက Facebook စာမျက်နှာ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြောင်းလဲဖို့ကိုဘယ်လို : ဖယ်ရှားခြင်းအားအတည်ပြုဟောင်းတဦးစီမံခန့်ခွဲသူ
Facebook စာမျက်နှာ၏ပြောင်းလဲမှုကိုပိုင်ရှင် Facebook ပေါ်တွင်တစ်ဦးကစာမျက်နှာပိုင်ဆိုင်မှုကိုအလွယ်တကူတယောက်ကိုတယောက် Facebook အကောင့်ကနေပြောင်းရွှေ့ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာစာမျက်နှာပိုင်ရှင်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ဖြစ်နိုင်သမျှသည်မဟုတ်, အခြားတဦးတည်းစီမံအုပ်ချုပ်သူများထံမှ switching သည့်လှည့်ကွက်ပါဘူး။...
2019-04-11 2019-04-11 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
Google ကအတွက်ဘာသာစကားပြောင်းပေးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? : Google က homepage တွင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသို့ပြောင်းလဲ
Google ထုတ်ကုန်များဘာသာစကားကိုပြောင်းလဲလုပ်နည်း Google ကထုတ်ကုန်ဘာသာစကားအများအားဖြင့် Google ရဲ့အကောင့်> data နဲ့ personalization သို့သွားနေဖြင့် Google ကိုမရရှိနိုင်သူတွေကိုအတွင်းမည်သည့်ဘာသာစကားဖို့အတွက်ပြောင်းလဲနိုင်> ဝဘ်များအတွက်ယေဘုယျဦးစားပေး> ဘာသာစကား> default ဘာသာစကား, နှင့်ဦးစားပေးတဦးတည်းဖို့ default ဘာသာစကားပြောင်းလဲနေတဲ့။...
YouTube ဗီဒီယိုကနေစာတန်းထိုး extract ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
YouTube ဗီဒီယိုကနေစာတန်းထိုး extract ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? : YouTube ကိုတစ်ဦး YouTube ဗီဒီယိုမှစာတန်းထိုး extract မှ Option ကို
YouTube ဗီဒီယိုကနေစာတန်းထိုး extract လုပ်နည်း YouTube ဗီဒီယိုကနေစာတန်းထိုး extract ရန် option ကိုအမှန်တကယ် YouTube ကိုတစ်ဦးစံ option တစ်ခုဖြစ်သည်၎င်း၏ကြည့်ရှုသူတို့၏ YouTube ဗီဒီယိုကနေစာတန်းထိုးရယူကူးယူဘို့ဗီဒီယိုပိုင်ရှင်ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်။...
အထက်ရှိ cPanel addon ဒိုမိန်းတစ်ခု addon ဒိုမိန်းဖန်တီး
2018-09-09 2019-04-01 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
အထက်ရှိ cPanel addon ဒိုမိန်းတစ်ခု addon ဒိုမိန်းဖန်တီး : bluehost addon ဒိုမိန်းကိုအောင်မြင်စွာကဆက်ပြောသည်
သင့်ရဲ့အထက်ရှိ cPanel အားလုံးကိုရဲ့ login ၏ပထမဦးဆုံးအထက်ရှိ cPanel အတွက် addon ဒိုမိန်းဖန်တီး assign နိုင်ရန်အတွက်။ အဲဒီမှာသူကလက်ရှိ hosting အတွက်အသစ်ပြင်ပ domains များ assign လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်နှင့်တစ်ဦးကိုရှေးခယျြဒေသခံဖိုလ်ဒါသူတို့ကိုညွှန်ရာအရပ်ဒိုမိန်းအမည်များ menu ကို, locate ။...
အသစ်ကဒိုမိန်း wordpress ကို site ကိုရွှေ့
2018-09-11 2019-04-01 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
အသစ်ကဒိုမိန်း wordpress ကို site ကိုရွှေ့ : အသစ်ကဒိုမိန်း wordpress ကို site ကိုလွှဲပြောင်းရန်ကဘယ်လို
အသစ်ကအိမ်ရှင်မှ wordpress ကို site ကိုလွှဲပြောင်းရန်ကဘယ်လို အိမ်ရှင်ပြောင်းလဲနေတဲ့, ဒါမှမဟုတ်အသစ်တခုဒိုမိန်းကိုပြောင်းလိုသောအခါ, ကသစ်ကိုစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အတူနောက်တဖန် functioning ရှိသည်နိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦး wordpress ကိုတပ်ဆင်ခြင်းအပေါ်လုပ်ဖို့ acions အနည်းငယ်ရှိပါတယ်။...
တေးရေးဆရာပြတင်းပေါက် install လုပ်နည်း
2018-09-13 2019-04-01 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
တေးရေးဆရာပြတင်းပေါက် install လုပ်နည်း : PHP ကို ​​Composer ပြတင်းပေါက် install
ပြတင်းပေါက် 10 ရက်နေ့တွင် xampp Install ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကို Windows ပေါ်မှာ PHP ကိုအတူ code ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်သည့် xampp, install ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တေးရေးဆရာ? php လိုအပ်ချက်များကိုပြတင်းပေါက် 10 xampp ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းအားဖြင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနေကြသည်။...
2019-02-18 2019-02-18 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
အကောင်းဆုံးကြော်ငြာလဲလှယ်ကွန်ယက်ကို : ကြေညာသူအဘို့အကောင်းဆုံးကြော်ငြာ network များ
ကြေညာသူအဘို့အကောင်းဆုံးကြော်ငြာ network များ သင့်ရဲ့ web site ကိုသို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်မှငွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ရရှိနိုင်အများအပြားကြော်ငြာလဲလှယ်ကွန်ရက်များရှိပါသည်။ အဲဒါကိုမှငွေရရှိအောင်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း? ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အကာလေလံစနစ်ကပေါ်အခြေခံပြီးသင့်ရဲ့ website အတွက်အမြင့်ဆုံးပေးဆောင်ကြော်ငြာတွေကို select တံ့သော Ezoic ဖျန်ဖြေမိတ်ဖက်မှာ Register ။...
အဆိုပါ tag ကို '' amp-ကြော်ငြာ extension ကို .JS script ကို '' ပျောက်နေ
2019-02-04 2019-02-04 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
အဆိုပါ tag ကို '' amp-ကြော်ငြာ extension ကို .JS script ကို '' ပျောက်နေ : အဆိုပါ tag ကို '' amp-ကြော်ငြာ extension ကို .JS script ကို '' ပျောက်နေ
'' amp-ကြော်ငြာ extension ကို .JS script ကို '' ဦးပျောက်ဆုံးနေသည် tag ကိုဖြေရှင်း amp စာမျက်နှာများကိုအကောင်အထည်ဖော်လျက်, အမှားရတဲ့အခါ tag ကို '' amp-ကြော်ငြာ extension ကို .JS script ကို '' ပျောက်နေသည်သို့မဟုတ်မမှန်ကန်ကြောင်း, ဒါပေမယ့် '' amp-ကြော်ငြာ '' အားဖြင့်လိုအပ်ပါသည်။ ဤသည်မကြာမီမှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်, Google မှ amp ကြော်ငြာများဖြင့်သို့မဟုတ်ကြော်ငြာကွန်ရက်ကကိုကျော် Google Search ကို Console ရှိသောကြောင့်ရိုးရိုးကြော်ငြာတွေဘို့တိကျတဲ့ amp script ကိုဝဘ်စာမျက်နှာ၌မေ့လျော့ထားပြီးဆိုလိုသည်။...
GZIP ချုံ့ Check
GZIP ချုံ့ Check : GZIP ချုံ့ Check
PHP နဲ့ htaccess အတွက်ဖိအားကို enable Google က PageSpeed ​​ကို fix သင့်ရဲ့ဇာတ်ညွှန်း / webserver ကိုအပေါ် gzip ချုံ့ဖွင့်ပေးခြင်းသင်သည် "ချုံ့ Enable" ကို Google PageSpeed ​​အပေါ်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောရမှတ်ရရှိ  စမ်းသပ်ကူညီဖို့, ဒါပေမယ့်လည်းသင့်ရဲ့ဧည့်သည်များဘရောက်ဇာပေါ်တွင်ပိုမိုမြန်ဆန်တင်ဆက်မှုအချိန်ကိုခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်မသာ။...
ဘယ်လိုက Google Sheet များအတွက်အပြန်အလှန်မြေပုံကိုဖန်တီးရန်
ဘယ်လိုက Google Sheet များအတွက်အပြန်အလှန်မြေပုံကိုဖန်တီးရန် : Google က Sheet များအတွက်အပြန်အလှန်မြေပုံ Create
Google က Sheet များအတွက်အပြန်အလှန်မြေပုံ Create Want to createaမြေပုံ ဇယား to ဝေစု, either by putting it online on your ဝဘ်site like below, or sharingapicture ? And, on top of that, an အပြန်အလှန်တုန့်ပြန်သော မြေပုံ?...
GZIP ချုံ့ WordPress ကိုဖွင့်ဖို့ဘယ်လို
GZIP ချုံ့ WordPress ကိုဖွင့်ဖို့ဘယ်လို : WordPress ကိုအတွက် gzip ချုံ့ Enable
ပိုမိုမြန်ဆန် WordPress ကိုမှသင်၏ဝဘ်စာမျက်နှာများကိုဆပ်ဖို့, အထူးသဖြင့် Enable Compression ကိုစမ်းသပ်မှုအပေါ် Google က PageSpeed ​​Insights အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားဂိုးသွင်းနိုင်ရန်အတွက်, သင် Gzip ချုံ့ကိုသက်ဝင်သင့်ပါတယ်။ ကြောင်း gidnetwork ပေါ်တွင်သင်၏ website အတွက်အမှုဖွင့်လျှင်သင်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။...
Prestashop Google Analytics ခြေရာခံခြင်း
Prestashop Google Analytics ခြေရာခံခြင်း : Prestashop များအတွက် Ganalytics module တစ်ခု
Prestashop များအတွက် Ganalytics module တစ်ခု Google Analytics သည်နှင့်သင်၏ Prestashop က်ဘ်ဆိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ဖို့အတွက်သင်ပြုဖို့ရှိသည်အပေါငျးတို့သ module တစ်ခု ganalytics install လုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ www.maleraffine.com နှင့်အတူရှေ့ဆက်ဖို့ဘယ်လို၏ဥပမာတစ်ခုအောက်တွင်ကြည့်ပါ:...
လျှော့စျေးနဲ့ဘောက်ချာ ကုဒ်s တွေကိုဖန်တီးဖို့ဘယ်လို Prestaဆိုင် (ရာခိုင်နှုန်း, သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏ, ... )
လျှော့စျေးနဲ့ဘောက်ချာ ကုဒ်s တွေကိုဖန်တီးဖို့ဘယ်လို Prestaဆိုင် (ရာခိုင်နှုန်း, သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏ, ... ) : လျှော့စျေးနဲ့ဘောက်ချာ ကုဒ်s တွေကိုဖန်တီးဖို့ဘယ်လို Prestaဆိုင် (ရာခိုင်နှုန်း, သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏ, ... )
လျှော့စျေးနဲ့ဘောက်ချာ ကုဒ်s တွေကိုဖန်တီးဖို့ဘယ်လို Prestaဆိုင် တစ်ရာခိုင်နှုန်းလျှော့စျေးကုဒ်အတွက်ဖောက်သည်အဓိပ်ပာယျအမိန့်လုပ်ငန်းစဉ်၏အဆုံးမှာတိကျတဲ့ဇာတ်ကောင် string ကိုဝင်တို့နှင့်သူ၏အမိန့်အပေါ် ABC ရုပ်သံ% လျှော့စျေးရရှိသွားတဲ့, တော်တော်လေးလွယ်ကူသည် - ထိုသို့ပင် Prestaဆိုင် တစ်ဦးစံလုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖြစ်ပါသည်, နောက်ဆုံးပေါ်တစ်လှည်းစည်းမျဉ်းကိုခေါ် 1.6 ဗားရှင်း။...
Google PageSpeed ​​Insights solve issues and get green : Google PageSpeed ​​Insights
Google PageSpeed ​​Insights  isagreat tool to see how your ဝဘ်site perform. In case you gotapoor score, here isaseries of articles with easy to implement solutions to solve most of the issues....
phpMyAdmin ကတစ်ဦးနိုင်ငံခြား key ကိုပေါင်းထည့်ဖို့ကိုဘယ်လို
2018-06-29 2019-02-02 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
phpMyAdmin ကတစ်ဦးနိုင်ငံခြား key ကိုပေါင်းထည့်ဖို့ကိုဘယ်လို : entry ကိုသွင်းစဉ်ကစားပွဲလယ်ပြင်နဲ့ဖော်ပြပေးနိုင်ငံခြားရေးသော့ချက်
phpmyadmin အတွက်နိုင်ငံခြား key ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ phpMyAdmin ကတစ်ဦးနိုင်ငံခြား key ကိုထည့်သွင်းခြင်းတော်တော်လေးရိုးရှင်းပေမယ့် option ကိုတွေ့ပါရန်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။...
အသုံးပြုပြီးသား XAMPP အမှားဆိပ်ကမ်းကို 80
2018-08-10 2019-02-02 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
အသုံးပြုပြီးသား XAMPP အမှားဆိပ်ကမ်းကို 80 : XAMPP ထဲမှာ error message apache ကို web server ကိုစတင်တဲ့အခါမှာ
အသုံးပြုပြီးသား XAMPP အမှားဆိပ်ကမ်းကို 80 XAMPP ဆာဗာပေါ်တွင် Apache ကို PHP ကိုစတင်ရန်ကြိုးစားနေသည့်အခါဤပြဿနာကိုရယူခြင်း?...
ဘယ်လို Notepad ထဲမှာ XML ကို format မှ ++
2018-08-16 2019-02-02 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
ဘယ်လို Notepad ထဲမှာ XML ကို format မှ ++ : Notepad ထဲမှာ XML ကိုတော်တော်လေးပုံနှိပ်ရလဒ် ++
ကကြီးမြတ် XML ကိုကြည့်ရှုသူ - ဒါဟာ Notepad built-in သော Plugin ကိုမန်နေဂျာ ++ အတွက်တိုက်ရိုက်မရရှိနိုင်, XML ကို Tools များခေါ် Notepad ++ က XML plugin ကိုသုံးပြီးတစ်ဦးက HTML ဖိုင်ကို Indent မှတစ်ဦးက XML အယ်ဒီတာအဖြစ်ကို Notepad ++ software ကို အသုံးပြု. ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်ပင်အလွန်လွယ်ကူသည် လမ်းကြောင်း။...
အခမဲ့တိုက်ရိုက် download, ရုပ်ရှင်တွေ
2018-09-04 2019-02-02 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
အခမဲ့တိုက်ရိုက် download, ရုပ်ရှင်တွေ : အခမဲ့အွန်လိုင်းများအတွက်ရုပ်ရှင်များ Download
အခမဲ့ MKV ရုပ်ရှင်တွေကိုတိုက်ရိုက် download, သွားလာရင်းသူတို့ကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါလိမ့်နိုင်ဖို့အတွက်ပြည်တွင်းဖြစ်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ရုပ်ရှင်ရှာဖွေနေပါသလား ဒါဟာအမှန်တကယ်သင်အကြိုက်ဆုံးကို search engine အပေါ်ငယ်လေးတစ်လှည့်ကွက်တွေနဲ့တော်တော်လွယ်ကူပါတယ်: ရိုးရိုးသင်တို့အဘို့ရှာကြသည်ခေါင်းစဉ်အားဖြင့် [ခေါင်းစဉ်] အစားထိုးအောက်ပါကုဒ်ကိုသုံးပါ:...
wordpress အမြောက်အများ SEO ဆိုသည်မှာ optimization အဘို့ရုပ်တုဆင်းတုကိုအမည်ပြောင်း
2018-10-14 2019-02-02 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
wordpress အမြောက်အများ SEO ဆိုသည်မှာ optimization အဘို့ရုပ်တုဆင်းတုကိုအမည်ပြောင်း : WordPress ကို image ကို Rename နှင့်အတူ Image ကို optimization SEO ဆိုသည်မှာ
wordpress အမြောက်အများပုံရိပ်တွေကိုအမည်ပြောင်း ပိုကောင်းတဲ့ WordPress ကို SEO ဆိုသည်မှာက်ဘ်ဆိုက် optimization အဘို့, ဒါပေမယ့်လည်းအထူးသဖြင့်ဓာတ်ပုံများကို / ပုံရိပ်တွေမီဒီယာအဘို့သင့်ဒေသခံဖိုင်တွေအမည်များ, share, နှင့်ဥပမာထဲမှာ 11-finalresult.png တူသောမကောင်းတဲ့အမည်များကိုမျှဝေရှောင်ရှားရန်မဟုတ်, တစ်ဦးပိုကောင်းသလိုရှိခြင်း ms-Excel-2013- ဘယ်လို-to--a-စားပွဲပေါ်မှာ-ကြည့်-ကောင်းသောလုပ်-ဆိုဒ်ပြောင်းရန်-ကော်လံ-to-မထိုက်မတန်-content.png အစားတစ်ခုလွယ်ကူသောဖြေရှင်းချက် WordPress ကိုအဘို့အပုံတစ်ပုံကို Rename plugin ကိုသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။...
Prestashop SEO ဆိုသည်မှာ URL ကို optimization
2018-11-05 2019-02-02 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
Prestashop SEO ဆိုသည်မှာ URL ကို optimization : PrestaShop SEO ဆိုသည်မှာဖော်ရွေ URL ကို
PrestaShop SEO ဆိုသည်မှာဖော်ရွေ URL ကို setup ကိုသင့်ရဲ့ဆိုင်ရှိခြင်းပြီးနောက်, သငျသညျ Prestashop 1.5 နှင့် 1.6 ဘို့, သင့်အကြောင်းအရာဖတ်လို့ရအောင်လင့်ခ်ဆိုလိုတာကဖော်ရွေ URLs များကိုရှိသည်ဖို့ငှါ။...
GoDaddy ဒိုမိန်း forwarding ကို redirect လုပ်ပေးခြင်းဒိုမိန်းက်ဘ်ဆိုက်မှ
2018-11-13 2019-02-02 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
GoDaddy ဒိုမိန်း forwarding ကို redirect လုပ်ပေးခြင်းဒိုမိန်းက်ဘ်ဆိုက်မှ : GoDaddy ဒိုမိန်း forwarding ကို
GoDaddy အပေါ်ဝယ်ခြင်းနှင့်အုပ်ချုပ်တစ်ဦးက domain name ကိုအလွယ်တကူအခြားမှတ်ပုံတင်မှာတည်ခင်းဧည်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်မှ redirect နိုင်ပါတယ်။ အခြားဆာဗာ redirected သည့် GoDaddy လေလံပွဲကနေ domain name ကိုရှိသည်ဖို့သင့်အကောင့်ကို configure ဖို့ဘယ်လိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ။...
GoDaddy ဒိုမိန်းသို့မဟုတ်အခြားကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းတွေနဲ့ Setup ကို Gmail က
2018-11-14 2019-02-02 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
GoDaddy ဒိုမိန်းသို့မဟုတ်အခြားကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းတွေနဲ့ Setup ကို Gmail က : GoDaddy ဒိုမိန်းသို့မဟုတ်အခြားကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းတွေနဲ့ Setup ကို Gmail က
ဂျီမေးလ်မှ GoDaddy ကအီးမေးလ် forward လုပ်နည်း Setup ကို Gmail ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူ configuration များနှင့်အတူအစား myaccount@Gmail.com ၏, myemail@mydomain.com ထံမှအီးမေးလ်များကိုပေးပို့, သင်၏ဂျီမေးလ်အကောင့်ပေါ်တွင်သင်၏အီးမေးလ်များကိုစုရုံးရန်။...
wordpress မြေပုံအညွှန်း XML ကို SEO ဆိုသည်မှာ sitelinks စာရင်း
2018-09-19 2019-02-02 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
wordpress မြေပုံအညွှန်း XML ကို SEO ဆိုသည်မှာ sitelinks စာရင်း : အားလုံးတစ်ဦးက SEO ဆိုသည်မှာမြေပုံအညွှန်းက XML အတွက်
wordpress အားလုံးစာမကျြနှာမရ သင်က share, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး Wordpress ကိုပြောင်းလဲမှု site ကို URL ကိုအပြီးစာရင်းတစ်ခုသို့မဟုတ် redirection စာမကျြနှာကိုဖနျတီး, အားလုံးတစ်ခုမှာခုနှစ်တွင် plugin ကို install လုပ်မယ့် website ကနေအားလုံးလင့်များရဖို့ဥပမာလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အရာ - သင့် Wordpress ကို websites မှလင့်များများ၏စာရင်းရရှိရန်အလို့ငှာ SEO ဆိုသည်မှာ Pack ကို။...
HTML မှာတွစ်တာ meta tag ကို များ
2018-12-08 2019-02-02 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
HTML မှာတွစ်တာ meta tag ကို များ : HTML မှာတွစ်တာ meta tag ကို များ
HTML မှာတွစ်တာ meta tag ကို များ တစ်ဦးက Twitter ကဒ်အတွက်စနစ်တကျဖေါ်ပြခြင်း website တစ်ခု URL ကိုရှိသည်နိုင်ရန်အတွက်အချို့သောအပို meta tag ကို များစာမျက်နှာခေါင်းစဉ်, 200 ဇာတ်ကောင်အထိအကြောင်းအရာဖော်ပြချက်, သူဖြစ်ရမည်သောဖန်ဆင်းရှင်အကြောင်းအရာလက်ကိုင်နှင့်ပုံရိပ်တစ်ခု, ထုတ်ဝေသူလက်ကိုင်အတူလိုအပ်သောများမှာ 120x120 pixels ထက်ပိုကြီးတဲ့။...
Google AdSense ငွေပေးချေမှု setting များကိုပေးချေမှုတံခါးခုံကိုပြောင်း
2018-08-12 2019-02-01 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
Google AdSense ငွေပေးချေမှု setting များကိုပေးချေမှုတံခါးခုံကိုပြောင်း : Google AdSense ငွေပေးချေမှုတံခါးခုံကိုအပြောင်းအလဲ
သငျသညျ adsense ကနေငွေရှာဖို့ဘယ်လိုနှင့်သင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ google ကြော်ငြာကို add ဖို့ဘယ်လိုဖြစ်သည့် Google AdSense အကောင့်တစ်ခုရှိသည်အခါ, သငျသညျ AdSense လစာမဘယ်လောက်မကြာခဏဖြစ်သည့် AdSense ငွေပေးချေမှုတံခါးခုံ, ပြောင်းလဲပစ်ချင်ပေလိမ့်မည်။...
အခမဲ့တုံ့ပြန်မှုက HTML သတင်းလွှာတင်းပလိတ်များနှင့် script များ
2019-02-01 2019-02-01 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
အခမဲ့တုံ့ပြန်မှုက HTML သတင်းလွှာတင်းပလိတ်များနှင့် script များ : အခမဲ့တုံ့ပြန်မှုက HTML သတင်းလွှာတင်းပလိတ်များနှင့် script များ
အခမဲ့သတင်းလွှာကိုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို သင့်ရဲ့ပရိသတ်ကိုတစ်သတင်းလွှာတက်ချိန်ညှိခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်မှုကြောင်းတစ်ခုက HTML သတင်းလွှာ template ကိုရှာဖွေနေ, အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း, Gmail နဲ့ MSOutlook နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်အလုပ်ဖြစ်တယ်, နှင့်စာရင်းပေးသွင်းမှုနှင့် PHP ကိုအတွက်ပေးပို့ခြင်းကိုစီမံခန့်ခွဲရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခု?...
2018-08-07 2019-01-04 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
phpMyAdmin ကတစ်ဒေတာဘေ့စပယ်ဖျက်ဖို့ကိုဘယ်လို : ဒေတာဘေ့စဖျက်မှုကိုအတည်ပြုရန်
phpMyAdmin ကတစ်ဒေတာဘေ့စဖျက်ခြင်းတော်တော်လေးလွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းတဲ့, ဒါပေမယ့်လည်းအလွန်အန္တရာယ်ရှိသည်။ backup တစ်ခုဒါမှလုပ်နေတာမရောက်မီရရှိနိုင်ပါသည်, လက်ျာဒေတာဘေ့စကိုရှေးခယျြခဲ့သကြောင်းကိုသေချာပါစေ!...
2018-09-16 2019-01-04 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
phpMyAdmin ပြုပြင်စားပွဲပေါ်မှာ : က MySQL စားပွဲပေါ်မှာပျက်ကျခဲ့အဖြစ်မှတ်သားသည်နှင့်ပြုပြင်ကြရပါမည်
က MySQL ပြုပြင်စားပွဲပေါ်မှာပျက်ကျ phpMyAdmin အတူ MySQL database ကိုတခုတခုအပေါ်မှာစစ်ဆင်ရေးပြီးနောက်မည်သည့်ရလဒ်ဆောင်ကြဉ်းနှင့်ပျက်ကျခဲ့မပြုခဲ့ကြောင်းဥပမာရှုပ်ထွေးရှာဖွေရေးမေးမြန်းချက်အဘို့, ကဒေတာဘေ့စတော့ဘူးလက်လှမ်းမဟုတျကွောငျးဖြစ်ပျက်ပေလိမ့်မည်။...
အထက်ရှိ cPanel သစ်ကိုဒိုမိန်း add
2018-11-18 2019-01-04 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
အထက်ရှိ cPanel သစ်ကိုဒိုမိန်း add : အထက်ရှိ cPanel သစ်ကိုဒိုမိန်း add
အထက်ရှိ cPanel အတွက်ဒိုမိန်းအသစ်တစ်ခုထပ်ထည့်ဖို့ကိုဘယ်လို အထက်ရှိ cPanel အတွက်ဒိုမိန်းအသစ်တစ်ခုထည့်သွင်းခြင်း Addon ဒိုမိန်းအတွက်တော်တော်လေးလွယ်ကူသည်> တစ်ဦး Addon ဒိုမိန်းကိုဖန်တီးပါ။...
Facebook OG meta tag ကိုs
2018-12-09 2018-12-31 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
Facebook OG meta tag ကိုs : Facebook OG meta tag ကိုs
အဆိုပါ Facebook ကိုဖွင့်ပါဇယားများတွင်စနစ်တကျဖေါ်ပြခြင်း website တစ်ခု URL ကိုရှိသည်နိုင်ရန်အတွက်အချို့သောအပို meta tag များ, စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်, စာမျက်နှာအမျိုးအစား, စာမျက်နှာ URL ကိုနှင့်တကွ, ပုံရိပ် URL ကို, စာမကျြနှာဖော်ပြချက်, ဆိုက်အမည်, ဆောင်းပါးထုတ်ဝေလိုအပ်သောများမှာ နှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံရက်စွဲများ, ဆောင်းပါးအပိုင်း, ဆောင်းပါး tag ကို, နှင့် Facebook ကိုစီမံခနျ့ခှဲသူ ID ကို။...
2018-12-18 2018-12-31 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
WordPress ကိုပြန်ဂန္အယ်ဒီတာပြောင်းရန် : WordPress ကိုပြန်ဂန္အယ်ဒီတာပြောင်းရန်
နောက်ကျောယခင်အယ်ဒီတာမှ WordPress ကို ပြန် WordPress ကို၏ယခင်အယ်ဒီတာကိုသွား plugins ကိုသွားပါ> သစ်ကို> ဂန္အယ်ဒီတာ add, install နှင့်ဂန္အယ်ဒီတာ plugin ကို activate လုပ်ဖို့။...
Facebook စာမျက်နှာ widget က WordPress ကို
2018-10-15 2018-12-21 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
Facebook စာမျက်နှာ widget က WordPress ကို : Facebook စာမျက်နှာတွေကို embed WordPress ကို
WordPress ကိုမှ Facebook မှာပို့စ်များကိုတင်သွင်းရန် သင်သည်သင်၏ WordPress ကိုဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ, ဒါမှမဟုတ်မည်သည့် website တွင်တစ်ဦးက Facebook စာမျက်နှာကိုမျှဝေသို့မဟုတ်ထည့်သွင်းရန်လိုလျှင်, ကတော်တော်ရိုးရှင်းပါသည်။...
2018-11-03 2018-12-21 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
Facebook စာမျက်နှာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ပိတ်မည် : Facebook ကစာမျက်နှာပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ကို turn off လုပ်နည်း
Facebook ကစာမျက်နှာပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုဖွင့်ဖို့ကိုဘယ်လို ပုံမှန်အားဖြင့် Facebook ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဧည့်သည်များပြန်လည်သုံးသပ် activated ကြသည်မဟုတ်။ ကိုသက်ဝင်သို့မဟုတ်ပိတ်ထားသူတို့ကို Settings> Templates ကိုနှင့်တဘ်ကိုသွား> တစ်ဦး Tab ကို> ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ Add နိုင်ရန်အတွက်။...
Google Analytics subdomain filter ကို ကို
2018-11-26 2018-12-21 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
Google Analytics subdomain filter ကို ကို : Google Analytics subdomain filter ကို ကို
Google Analytics အတွက်မလိုအပ်တဲ့ hostnames fix လုပ်နည်း ဒါဟာ> အဒ်မင်အတွက်တိကျတဲ့အမြင်များအတွက် filter များ အသုံးပြု. domains များနှင့်ဆင့်ခံဒိုမိန်းကိုပြသသို့မဟုတ်ဝှက် Google Analytics အတွက်ကြည့်ရန်> စိစစ်မှုများဖြစ်နိုင်> filter ကိုထည့်ပါ။...
အသုံးပြု XAMPP Apache ကိုဆိပ်ကမ်း 443
2018-12-16 2018-12-21 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
အသုံးပြု XAMPP Apache ကိုဆိပ်ကမ်း 443 : အသုံးပြု XAMPP Apache ကိုဆိပ်ကမ်း 443
အသုံးပြု XAMPP Apache ကိုဆိပ်ကမ်း 443 by Skype အဆိုပါအမှား Skype ကိုပြီးသားဆိပ်ကမ်းကိုအသုံးပြုပြီးထံမှလာသည်။ ဒါကြောင့်ဖြေရှင်းနိုင်ရိုးရှင်းစွာ Skype ကိုပိတ်ပြီး, XAMPP ကိုစတင်ရန်နှင့်နောက်မှလိုအပ်ပါကနောက်တဖန် Skype ကိုစတင်နိုင်ရန်အလို့ငှာ။...
ရွေးချယ်ရေးချနိုင်ငံခြား key ကိုတစ်စက်အတွက် phpMyAdmin display ကိုဖျောပွခကျြ
2018-11-02 2018-12-21 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
ရွေးချယ်ရေးချနိုင်ငံခြား key ကိုတစ်စက်အတွက် phpMyAdmin display ကိုဖျောပွခကျြ : ရွေးချယ်ရေးချနိုင်ငံခြား key ကိုတစ်စက်အတွက် phpMyAdmin display ကိုဖျောပွခကျြ
phpMyAdmin နိုင်ငံခြားသော့ချက်ဖော်ပြချက်စက်စက်ကျ ဒါဟာအစားအမှတ်အသား field ရဲ့တစ်ဦးနိုင်ငံခြားသော့ချက်၏ဖော်ပြချက်ဖော်ပြရန် phpMyAdmin အတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။...
FileZilla က client ကိုမျိုးစုံဆက်သွယ်မှုတိုးမြှင့်
2018-10-10 2018-12-21 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
FileZilla က client ကိုမျိုးစုံဆက်သွယ်မှုတိုးမြှင့် : FileZilla ကအရှိန်မြှင့်
FTP ကို ​​upload နှုန်း FileZilla တိုးမြှင့်ဖို့ဘယ်လို ဒါဟာတစ်ပြိုင်နက်ဆက်သွယ်မှုများ၏အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် FileZilla အတူ FTP ကို ​​upload နှုန်းတိုးမြှင့်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစအတူတူပင်အကြောင်းပြချက်များအတွက်ဒေါင်းလုပ်အမြန်နှုန်းတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။...
2018-10-09 2018-12-21 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
wordpress ပုံငယ်များအသစ်တဖန်မွေးဖွား : wordpress ပုံငယ်များအသစ်တဖန်မွေးဖွား
wordpress ပုံငယ်များအသစ်တဖန်မွေးဖွား အလွန်ကြီးစွာသောအောင်မြင်မှုနှင့်အတူအတော်လေးအချိန်အတန်ကြာများအတွက် plugin ကိုမီဒီယာဖိုင်မှတ်တမ်း Rename ကို အသုံးပြု. ခဲ့ပြီးမှ, အဲဒါကိုတော့ဘူး thumbnail ကို generate မနိုင်, နောက်ဆုံးပေါ် updates များကိုတစ်ဦးနှင့်အတူတူသောပုံရသည်။...
အမြစ်မှ subdomain ကနေ Wordpress ကိုရွှေ့
2018-10-01 2018-12-21 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
အမြစ်မှ subdomain ကနေ Wordpress ကိုရွှေ့ : အမြစ်မှ subdomain ကနေ Wordpress ကိုရွှေ့
အမြစ်မှ subfolder ကနေ WordPress ကိုရွှေ့ အခြား directory ကိုရန်သင့် WordPress ကို installation ကိုရွှေ့ဖို့အမိန့်, သင်အနည်းငယ်ခြေလှမ်းများ execute ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။...
FileZilla က Windows တွင်တစ်ဦးတယောက်က FTP က်ဘ်ဆိုဒ်ကွန်နက်ရှင်၏ password ကို retrieve
2018-07-26 2018-12-21 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
FileZilla က Windows တွင်တစ်ဦးတယောက်က FTP က်ဘ်ဆိုဒ်ကွန်နက်ရှင်၏ password ကို retrieve : sitemanager.xml ဖိုင်ထဲမှာ FTP ကိုဆက်သွယ်မှုများကိုအသေးစိတ်အချက်အလက်
FTP ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်များဆက်သွယ်မှု FileZilla ကကွန်နက်ရှင်မန်နေဂျာမှာ set up အခါတခြားဆက်သွယ်မှုသတင်းအချက်အလက်တလျှောက်, စကားဝှက်ကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ဖို့ဖြစ်နိုင်, ပင်တစ်ဦးသည်အခြား FileZilla ကတပ်ဆင်ဖို့ကဖြတ်သန်းရတယ်။...
htaccess အတွက် Google က PageSpeed ​​သြဇာ browser ကိုယာယီသိမ်းဆည်း fix
2018-07-24 2018-12-21 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
htaccess အတွက် Google က PageSpeed ​​သြဇာ browser ကိုယာယီသိမ်းဆည်း fix : Google ကစာမျက်နှာမြန်နှုန်း - မိုဘိုင်းပေါ်တွင် 51 ၏ browser ကိုယာယီသိမ်းဆည်းပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများမပြုမီရမှတ်
htaccess အတွက် browser ကိုယာယီသိမ်းဆည်းပိုကောင်းအောင်, ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ htaccess ဖိုင်ထဲမှာ  တစ်ဦး Stack လျှံချည်ခြင်းဖြင့်မှုတ်သွင်းအောက်ပါကုဒ်ကိုထည့်ပါ:...
Post ကို link ကို preview ကို WordPress ကို
2018-10-16 2018-10-27 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
Post ကို link ကို preview ကို WordPress ကို : WordPress ကို preview ကို plugin ကို
ဆောင်းပါးအဘို့နှင့် preview ကိုများအတွက်နှစ်ဦးစလုံး - ပုံမှန်အားဖြင့်ပို့စ်များကို WordPress ကိုဖန်တီးနှင့်အနာဂတ်ထုတ်ဝေရန်စီစဉ်ထားသည့်အတွက် logged မဟုတ်အသုံးပြုသူများမမြင်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။...
WordPress ကို Polylang ပျောက်ဆုံးနေလင့်များ
2018-10-17 2018-10-24 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
WordPress ကို Polylang ပျောက်ဆုံးနေလင့်များ : ကဆက်ပြောသည် PolyLang ဘာသာစကားလင့်များ
Polylang ပျောက်ဆုံးနေဘာသာစကားလင့်များ တစ်ဘာသာမျိုးစုံ Wordpress ဘလော့ဂ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အတော်ကြာဘာသာစကားများရေးသားချက်များရှိခြင်းသောအခါ, ဘာသာပြန်ထားသောခဲ့ကြကြောင်းအချို့ပို့စ်များကို PolyLang plugin ကိုအတူတစ်ဦးချင်းစီကတခြားအကြားဆက်နွယ်နေကြသည်မဟုတ်ကြောင်းဖြစ်ပျက်ပေလိမ့်မည်။...
phpMyAdmin အတွက်ကြီးမားတဲ့ SQL file ကိုတင်သွင်းရန်
2018-08-06 2018-08-11 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ Web ကို
phpMyAdmin အတွက်ကြီးမားတဲ့ SQL file ကိုတင်သွင်းရန် : 2MB န့်သတ်ချက်က MySQL သွင်းကုန်နှင့်အတူ phpMyAdmin
ထို့အပြင် phpMyAdmin ကတစ် csv တင်သွင်းဖို့သုံးနိုင်တယ်, ဒါမှမဟုတ်ပင်တစ် OpenDocument Spreadsheet တင်သွင်းဖို့ရာ - ပုံကို phpMyAdmin အတွက်ပိုကြီးတဲ့ SQL file ကိုတင်သွင်းနိုင်မှအံ့သြသည့်အခါအဖြေစံ phpMyAdmin က SQL သွင်းကုန်ကနေတဆင့်ခွင့်ပြုပါရန်, တော်တော်လေးလွယ်ကူသည် phpMyAdmin ကအတွက်ရိုးရှင်းစွာတင်သွင်းမီနူးထဲမှာ input ကို format နဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။...
SAP : Plan ကို-Buy-Pay ကိုမ Ariba ဖြစ်စဉ်ကိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်,
အမျိုးမျိုးသော : WhatsApp ကိုအဆင့်အတန်းအပေါ် Instagram ကိုဗီဒီယိုများဝေမျှဖို့ကိုဘယ်လို
လူမှုကွန်ယက် : ဖမ်း Instagram ကိုဗီဒီယိုအပ်လုဒ်ဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Web ကို : အကောင်းဆုံးစျေးပေါက web hosting အတွက်
ရုံး ကိုကုန်ထုတ်စွမ်းအား : Excel ကိုအတွက်ထပ်တူများကိုဖျက်ပစ်ရန်ကဘယ်လို
SalesForce : SalesForce အတွက်အစီရင်ခံစာကိုဖန်တီးရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
Fashion : သင့်ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားချော့မော့ပြီးပြည့်စုံသော swimsuit ကိုရှာရေကူးဝတ်စုံအကြံပေးချက်များ
Marketing : AdSense အဖို့အကောင်းဆုံးအစားထိုးကဘာလဲ?
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ : အကြွေးဝယ်ကတ်များ၏ကန့်သတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးသွားအာမခံ
Awesome ကို updates များကိုသင့်ရဲ့ Inbox ထဲတွင်တိုက်ရိုက်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏ Get ။
ရုံအောက်တွင်အီးမေးလ်လိပ်စာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ Subscribe ကလစ်နှိပ်ပါ!
ဖမ်း Instagram ကိုဗီဒီယိုအပ်လုဒ်ဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Lyca မိုဘိုင်း Activate အင်တာနက် setup ကို access point name ကို
ရဲ့ login ပြီးနောက် SAP interface ကို၏သည် SAP ပြောင်းလဲမှုဘာသာစကား
ဖိုင်တွေနှိုင်းယှဉ် ++ notepad
Outlook နဲ့ဖိုင်တွဲအဆင့်ဆင့်အတွက်ပျောက်ဆုံး folder ကိုရှာတွေ့
SAP အဆိုပါစျေးနှုန်းအမှားဖြေရှင်းနိုင်: မသင်မနေရအခွအေနေ MWST ပျောက်ဆုံးနေ
SAP GUI ကိုအတွက်အရောင်ကိုပြောင်းလဲဖို့ကိုဘယ်လို
SAP တစ်ခု MRP Controller (ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များစီမံကိန်း) Define
Windows ကို 10 saplogon.ini ဖိုင်သိမ်းထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်မှာ
စာသားဖိုင်ထဲကနေထုတ်ယူအီးမေးလ်လိပ်စာများ ++ notepad
Google AdSense ၏အကျိုးကျေးဇူးကဘာလဲ?
သင့်ရဲ့ website မှာ AdSense အကိုစတင်သုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
SalesForceLightning အတွက်ကျွန်တော်တို့ navigation bar မှထုံးစံအရာဝတ္ထုကိုထည့်သွင်းဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အဘယ်အရာကို CHAP ဖြစ်ကြပြီးသင်မည်သို့ယောက်ျားမိန်းမအဖြစ်သူတို့ကိုဝတ်ဆင်သလဲ?
Yoann နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံဖြစ်ပါတယ်။ သူကအမျိုးမျိုးသောယဉ်ကျေးမှုများ, အထူး, စီးနှင့်နည်းပညာများအကြားကူးလူးဖလှယ်မှုဆောင်ရွက်မှုတွေ, သူတို့ရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကူညီပေးသည်။ သူဒီဇိုင်းတိုးတက်အောင်, ပြွီး, တီထွင်ဆန်းသစ်နှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ client များကျေနပ်အောင်ရန်, အလုပ်မလုပ်အောင်အတွက်ဆိုရမှာပါ။ သူကသူ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုမျှဝေဖို့ www.ybierling.com ဖန်တီးခဲ့သည်။ သူကနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်စုံလင်ခြင်း, ငွေကြေး optimization, SAP ERP စီမံကိန်းကိုဖြန့်ကျက်, နဲ့ Web based စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထောက်ခံမှုပိုမိုထက် 10 နှစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူဟာကမ္ဘာအဝှမ်းမှနိုင်ငံအများအပြား၌, ယင်းကဲ့သို့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, အလှကုန်, လူသုံးကုန်, အလှအပစောင့်ရှောက်မှု, ဒါမှမဟုတ်ဖက်ရှင်အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသွင်ပြောင်းဖြစ်နိုင်သမျှဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
Ezoic နှင့်အတူကြော်ငြာဝင်ငွေ 50-250% ကိုတိုးပှား။ တစ်ဦးက Google ကိုလက်မှတ်ထုတ်ဝေရေး Partner ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ SIM ကဒ်
လေယာဉ်, ဟိုတယ်, ကားကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်ဘွတ်ကင်
ထိတှေ့ - ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ